BAOLINA KITRA AFRIKANINA : Miankina amin’ny FIFA ny mety handraisan’ny Barea U17 anjara
Mitaintaina mafy ny mpilalao mandrafitra ny Barean’i Madagasikara, latsaky ny 17 taona amin’izao fotoana izao, satria dia nilatsaka ny teny midina avy any amin’ny CAF fa tsy i Madagasikara indray no handray izany lalao iraisam-pirenena izany amin’ity taona 2017 ity. 20 mars 2017
Hatramin’ny faramparan’ny taona 2014 anefa no nanomana izany ireo kilonga lahy ireo raha vao nahafantatra fotsiny fa ny volana avrily taona 2017 no hanataterahana izany eto Antananarivo.
Very maina fotsiny, araka izany, ny fanomanan-tena sy ny vola lany nandritra izay fotoana maro nentina nanomanan-tena izay. Ahiana ihany koa mantsy ny mety tsy hahafahan’ny Barean’i Madagasikara latsaky ny 17 taona handray anjara amin’izany lalao fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika na ny Can 2017 izany. Izay fanapahan-kevitry ny Federasiona iraisam-pirenena eo amin’ny taranja baolina kitra no ahafantarana ny tena marina. Mandra-pivoakan’izay fanapahan-kevitra izay anefa dia mbola manohy ny fanazaran-tenany eny Carion ny Barea Akademia.
Marihina fa tsy anisan’ireo ekipa tafiakatra nandritra ny fifanintsanana handray anjara amin’ity Can-U17 ity ny ekipam-pirenena malagasy saingy noho i Madagasikara nanambara ny fahavononany handray io lalao io no antony ahafahany mandray anjara. Amin’izao fotoana izao, noho ity fifaninanana ity nafindra any amin’ny firenen-kafa no mampitaintaina ireo zandry kely mandrafitra ny Barea ireo. Manatrika ity fivorian’ny FIFA ity rahateo ny filohan’ny Federasiona Malagasy ny taranja Boalina kitra ka andrasana fatratra izay hiverenany an-tanindrazana amin’izay fanapahan-kevitry ny FIFA izay.
BAOLINA KITRA AFRIKANINA
2017-03-16 07:29:07 par rabotomarison dieudonné
tokony hiady mafy ny federasiona malagasy handraisana io U17 io !